अलपत्र परेको यो विद्यालय भवन कहिले बन्ला ? (अडियो सहित) – Online Jagaran
सुर्खेत, ९ जेठ (जागरण) । ठेकेदारको लापरवाहीले दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडानम्वर ८ को मालिका माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन अलपत्र परेको छ ।
दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेर २०७० सालमा सम्झौता गरिएको ‘नेपाल-भारत मैत्री’ भवन ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसकेको हो ।
भारतिय दुताबासको ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको खानी निर्माण कम्पनी काठमाडौंले अहिले काम अलपत्र पारेको छ । १२ वटा कोठाको डिजाइन गरिएको तीन तले भवनको ढलानबाहेक अरु काम भएको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीका स्थानिय प्रतिनिधि दिपक शाहीले विद्यालय भवनका विषयमा कुनै चासो नदिने र सोधपुछ् गर्दा जवाफ नै नदिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर बस्नेतको गुनासो छ ।
ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न नगर्दै दुताबासबाट रकम माग गरेको छ तर दुताबासले काम सम्पन्न भएमात्र भुक्तानी हुने बताएको छ ।
यता जागरण एफ. एम. सँगको कुराकानीमा कम्पनीका प्रतिनिधि शाहीले बीचमा रोकएको काम यही आर्थिक वर्षभित्र काम सक्नेगरी शुरु गर्ने बताउनुभएको छ । जेठ १२ गते कामदारहरु विद्यालय पुग्ने र १३ गतेदेखि काम शुरु हुने बताउनुभयो ।
सुन्नुहोस् शाहीसँग दीपेन्द्र ओलीले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
जनयुद्ध दिवस मनाइदै
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:१५ February 13, 2019 जागरण